कोरोना संक्रमित आमाबाट जन्मिएको शिशुको मृत्यु « AayoMail
नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा कोरोना भाइरस संक्रमित महिलाबाट जन्मिएको शिशुको मृत्यु भएको छ ।
रुकुम पश्चिम चौरजहारीकी २८ वर्षीया महिलाले साउन २४ गते राति २.७ केजी तौलको शिशु जन्म दिएकी थिइन्। शिशुको उपचारका क्रममा सोमबार बिहान १ बजे मृत्यु भएको अस्पतालका उपनिर्देशक डाक्टर दिनेश श्रेष्ठले जानकारी दिए।
प्रसूति हुन भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा भर्ना भएकी महिलालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। ३९ हप्ताकी गर्भवती महिलामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि कोभिड–१९ लेभल ३ अस्पतालका रूपमा रहेको नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा थप उपचारका लागि रेफर गरिएको थियो।
रेफर भएकै दिन शनिबार राति शल्यक्रिया गरेर बच्चा निकालिएको भए पनि बच्चाले आमाको पेटभित्र दिसा गरेको र धड्कनसमेत कम भएका कारण आइसियुमा राखेर उपचार सुरु गरिएको थियो। यद्यपि उपचारकै क्रममा नवजात शिुशको सोमबार बिहान १ः३० बजे मृत्यु भएको डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए।
आमाको अवस्था भने सामान्य रहेको डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए। कोरोना संक्रमित आमाबाट शल्यक्रिया गरी शिशु निकालिएको भए पनि शिशुमा भने कोरोना संक्रमण नदेखिएको डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए।